व्यवस् िथत नगर विकासका लागि कटिवद्ध छांै | Naya Yougbodh National Daily Free songs
Home / अन्तर्वार्ता / व्यवस् िथत नगर विकासका लागि कटिवद्ध छांै
व्यवस् िथत नगर विकासका लागि कटिवद्ध छांै
Posted by: युगबोध in अन्तर्वार्ता May 2, 2018	0 137 Views
अध्यक्ष– घोराही नगर विकास समिति
घो राही नगर विकास समितिमा नया ने तृत्व आएको पनि १० महिना पुग्न थाल्यो  । व्यवस् िथत वस् ती विकासका कामहरु गर्न समितिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । खासगरी अम्बापुर (नवलपुर) जग्गा विकास कार्यक्रमलाई सम्पन्न गनेर् र समग्रमा घो राही नगरलाई व्यवस् िथत गनेर् सवालमा के कस्ता काम भएका छन् त ? यसै सन्दर्भमा नगर विकास समितिका अध्यक्ष बसन्त चौ धरीसग युगबो धकर्मी जे .एन.सागरले गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षे प यहा प्रस्तुत गरिएको छ । – सम्पादक
नगर विकास समितिको गतिविधि के छ ?
विशे षगरी नियमित कामहरु भइरहे का छन् । अहिले जग्गा एकीकरण विकास समितिमार्फत भएको नवलपुरको ल्याण्ड पुलिङको काम नै हो  । खासगरी ४०÷६० को नियमानुसारको जग्गा उपभो क्ताहरुलाई फिर्ता गनेर् काम भइरहे को छ । अन्य फाटफुट विकास निर्माणका काम पनि भइरहे का छन् । यो काममा के ही त्रुटि नगर विकासको तर्फबाट र के ही उपभो क्ताहरुको तर्फबाट पनि भएको छ । यी त्रुटिले गर्दा काममा के ही समस्या पनि आएको छ ।
जग्गा विकासको काम अलपत्र जस् तै छ उसो भएयो कार्यक्रम खासगरी व्यवस् िथत घडे री निर्माण गरे र उपभो क्ताहरुलाई वितरण गर्नका लागि नै थालिएको हो  । यो १५ वर्षभित्र सक्नुपनेर् कार्यक्रम हो  । तर उद्दे श्य अनुरुप यहा“ काम हुन नसके को सत्य हो  । विगतमा एकपछि अकोर् अध्यक्ष फे रिरहने , पूरा कार्यकाल बसे र काम गर्न नसक्ने अवस् थाले के ही समस् या र विवाद तथा ढिलाइ पनि भए । अकोर् अप्ठे रो के छ भने यहँ हरे क काम बो र्ड बै ठकबाट निर्णय गरे र गर्नुपनेर् अवस् था छ । बो र्ड मिटिङका लागि सातवटा विषयगत कार्यालयहरुको सहभागिता हुन्छ । त्यसको सदस् य सचिव शहरी भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रहने व्यवस् था छ । उहा“हरु सबै को समय नमिल्ने यसले पनि समयमा बै ठक बस् न नसक्ने स् िथतिले समस् या आएको हो र यसले उपभो क्ताहरुमा के ही निराशा पनि छाएको छ । पहिले कै अवस् थाको जमिन जस् ताको तस् तै लिदाखे री निराशा छाउनु स् वाभाविक पनि हो  । जुनढंगले त्यहा“को विकास, नाला, घडे री, सडक पुरा निर्माण भएको अवस् थामा पाउनुपनेर् हो  । त्यो अवस् था अहिले सम्म आएन जसले उहा“हरु मर्कामा पर्नुभएको छ ।
खास अवरो ध कहाबाट भइरहे को छ ?
खासगरी उपभो क्ताकै बीचमा पनि समस् या छ । अहिले सम्म सबै ठाउमा ट्रयाक खुलिसके को अवस् था छै न । त्यो ट्रयाक खुल्न नसक्नुका पछाडि त्यहा“का पूर्वाधार नै हुन् । पहिले नै तयार गरिरहे का संरचनालाई मुआव्जा दिने कुरा नै समस् याको रुपमा आएको छ । ल्याण्ड पुलिङले दिने सरकारी मुआव्जा उहॉ“हरुले स् वीकार गर्नुभएको छै न् जसले गर्दा नया“ ट्रयाक खो ल्न समस् या भएको छ । त्यति मात्रै हो इन, त्यहा“ बसो बास गदैर् आएका सुकुम्वासीको बै कल्पिक व्यवस्था पनि गर्न सकिएको छै न । उहा“हरुको व्यवस् थापन नगर विकासले मात्रै सम्भव छै न । यसप्रति सरकारको दायित्व पनि हुनुपर्छ । यसै गरी ठूला–ठूला यो जना तर बजे ट अभाव नै हो  । एउटा सडक निर्माण गर्न एक करो ड खर्च लाग्ने दे खिन्छ । खाडल पुर्न ठे क्का दिने तर उहाहरुले नियमित काम गर्न नसक्नुले पनि समस् या भएको छ । टे ण्डरमै ४० प्रतिशतसम्म घटे र टे ण्डर लिने तर काम गर्न नसक्ने समस् याले नै काममा ढिलाइ भइरहे को हो  ।
उपभो क्ताहरुले त सबै काम गर्न तपाइ“हरुलाई पूर्जा बुझाएकै हो नि समस्या किन ?
ल्याण्ड पुलिङका लागि त ५१ प्रतिशत उपभो क्ताहरुको सहमति भए पनि काम शुरु गर्न सकिन्छ । तर सबै को सहमति छै न । अकोर् कुरा मुआव्जा सरकारी दररे ट भन्दा बाहिर जानै सकिदै न । नत्र बे रुजु बो क्नुपनेर् अवस् था आउ“छ । यस् तो अवस्थामा सरकारी मुआव्जाले उहा“हरुको पुरानो संरचना भत्काउन पनि पुग्ने दे खिदै न, नया“ बनाउन त परै जाओ स । त्यसकारणले उहा“हरुले मान्नुभएको छै न । यसले गर्दा समस् या आएको हो  ।
निकास के हो त ?
यो समस्या निकै जटिल छ । तर पनि निकास खो ज्नुपर्छ । निकासका लागि त्यहीकै उपभो क्ताहरुस“ग सहमति माग्ने नै उत्तम विकल्प हो  ।
झन पछि धके लिने पो दे खियो है ?
हो  । के ही धके लिएको छ । तर हामीले उपभो क्ताहरुको समस् याप्रति पनि गम्भीर भएर सो च्न जरुरी छ । व्यापार, व्यवसाय गर्नुपर्छ तर जग्गा फुकुवा अहिले सम्म हुन सके को छै न ।
नियमित काममै ढिलासुस् ती हु“दा झन खे लकुद ग्राउण्ड, स् वीमिङ पुललगायतका काम कहिले हो लान् ?
म ने तृत्वमा आइसके पछि कम्तिमा बाटो का ट्रयाकहरु खो ल्ने , ग्रावे लिङ गनेर् , नाला निर्माण सक्ने र कटिङ, फिलिङको काम पनि सबै सक्ने यो जना थियो  । तर प्राविधिक कुरा भने जस् तो गरी ह“ुदो रहे नछ । डिटे ल सभेर् गरियो । तर कन्सल्टे न्सीले रिपो र्ट दिए पनि त्यो अलिकति तलमाथि भएको जस् तो हामीलाई लागे को छ । त्यसै ले आफूले गर्न चाहदा चाहदै प्राविधिक कारणले गर्दा रो किनुपनेर् अवस्था छ ।
मुआव्जाको विषयमा राज्यले के ही कन्सिडर गर्न सक्ने ठाउ छ त ?
मुआव्जाको मापदण्ड छ । मे रो विचारमा सरकारी तवरबाट यहा“का उपभो क्ताहरुलाई के ही गनेर् ठाउ छै न । उपभो क्ताहरुबीचबाटै एउटा विधि बनाएर निकास निकाल्न जरुरी छ । उपभो क्ताहरुकै राय लिएर समस् याको समाधान खो ज्नुपर्छ ।
यहा ने तृत्वमा आउदै गर्दा बायो ग्यास प्लान्ट निर्माण गर्छु भन्नु भएको थियो , कहा पुग्यो काम ?
बायो ग्या“स प्लान्टको यो जना म आउ“दा वित्तिकै के ही काम गरांै भन्ने हिसावले मै ले ल्याएको हु“ । तर यो यो जना निर्माणका लागि लागत कति लाग्ने भन्ने विषयमा डिटे ल सभेर् गर्नका लागि सम्वन्धित कार्यालयमा पुगे को पनि थिए“ । तर इञ्जिनियर नभएका कारणले अहिले सम्म त्यो काम हुन सके को छै न । कार्यालयले इञ्जिनियर आएलगत्तै हामी खवर गछौर् ं भन्नुभएको छ । तर अहिले सम्म खबर आएको छै न ।
घो राही उपमहानगरमा सुन्दर वस् ती विकासका लागि के छन यो जना ?
घो राही उपमहानगरलाई कसरी सुन्दर बनाउने भन्ने विषयमा पहिलो कुरा त नगरवासी नै जागरुक बन्नुपर्छ । नगर विकासले गरे का प्लानिङ र अहिले जथाभावी भइरहे का प्लानिङलाई हे र्दा नै थाहा हुन्छ । नगर विकासले गरे का प्लानिङकै कारण घो राही उपमहानगर दे शकै नमूना नगर बने को छ । अब पनि नगर विकासले गरे का प्लानिङ अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि उपमहानगरपालिका र नगर विकास स“गस“गै भएर काम गर्नुपर्छ । यसरी स“गै रहे र काम गर्न सकियो भने सुन्दर घो राही बनाउन सकिन्छ । तर नवलपुर ल्याण्ड पुलिङको काम अलपत्रजस् तै ह“ुदा उपमहानगरले खासै चासो दे खाएको दे खिदै न । त्यहा“को जग्गाको कर उपमहानगरले लिन्छ । तर कुनै वजे ट विनियो जन गरे को पाइ“दै न । यसर्थ ल्याण्ड पुलिङका लागि बजे टिङ गरे र अघि बढे सुन्दर नगर बनाउन सकिन्छ ।
अब त तपाइ“हरु पनि त्यतै जाने कुरा छ नि, अब सहज हुन्छ कि ?
नगर विकास स् थानीय तहमा जाने भन्ने कुरा बाहिर–बाहिर सुनिएको छ । तर आधिकारिकरुपमा कुनै जानकारी आएको छै न । अन्य विषयगत कार्यालयहरु त गइरहे का छन् । भो लिका दिनमा त्यस् तो निदेर् शन आए हामी त्यहीं गएर काम गर्न तयार छांै  । त्यसले व्यवस् िथत नगर निर्माणमा सहज हुने छ ।
अहिले सम्मका समस् या समाधान र राम्रा कामलाई थप अघि बढाउन के गर्नुपर्ला ?
नगर विकासमा पुराना समस् याहरु छन् । ती समस् या समाधान गर्नुपनेर् छ । के ही काम पनि भएका छन । सडक सञ्चालन, मो ही समस् या समाधानका लागि पहल गरिएको छ । सबै को साथ सहयो ग भएकाले काम के ही अघि बढे को हो  । घडे री हराएका समस् या पनि थिए । हामीले समाधानका लागि पहल शुरु गरे का छौ ं । पुराना कामहरु धे रै भएका छन् । त्यसका लागि वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, टो ल विकास संस्था र उपमहानगरका कर्मचारीहरुबाट पनि साथ सहयो ग पाइएको छ । आगामी दिनमा पनि त्यस् तै साथ सहयो ग भए सुन्दर नगर विकासमा ठूलो टे वा पुग्ने छ ।
विशे षगरी नियमित कामहरु भइरहे का छन् । अहिले जग्गा एकीकरण विकास समितिमार्फत भएको नवलपुरको ल्याण्ड पुलिङको काम नै हो  । खासगरी ४०÷६० को नियमानुसारको जग्गा उपभो क्ताहरुलाई फिर्ता गनेर् काम भइरहे को छ । अन्य फाटफुट विकास निर्माणका काम पनि भइरहे का छन् । यो काममा के ही त्रुटि नगर विकासको तर्फबाट र के ही उपभो क्ताहरुको तर्फबाट पनि भएको छ । यी त्रुटिले गर्दा काममा के ही समस् या पनि आएको छ ।
जग्गा विकासको काम अलपत्र जस् तै छ उसो भएयो कार्यक्रम खासगरी व्यवस् िथत घडे री निर्माण गरे र उपभो क्ताहरुलाई वितरण गर्नका लागि नै थालिएको हो  । यो १५ वर्षभित्र सक्नुपनेर् कार्यक्रम हो  । तर उद्दे श्य अनुरुप यहा“ काम हुन नसके को सत्य हो  । विगतमा एकपछि अकोर् अध्यक्ष फे रिरहने , पूरा कार्यकाल बसे र काम गर्न नसक्ने अवस् थाले के ही समस् या र विवाद तथा ढिलाइ पनि भए । अकोर् अप्ठे रो के छ भने यहँ“ हरे क काम बो र्ड बै ठकबाट निर्णय गरे र गर्नुपनेर् अवस् था छ । बो र्ड मिटिङका लागि सातवटा विषयगत कार्यालयहरुको सहभागिता हुन्छ । त्यसको सदस् य सचिव शहरी भवन डिभिजन कार्यालयका प्रमुख रहने व्यवस् था छ । उहा“हरु सबै को समय नमिल्ने यसले पनि समयमा बै ठक बस् न नसक्ने स् िथतिले समस् या आएको हो र यसले उपभो क्ताहरुमा के ही निराशा पनि छाएको छ । पहिले कै अवस् थाको जमिन जस् ताको तस् तै लिदाखे री निराशा छाउनु स् वाभाविक पनि हो  । जुनढंगले त्यहा“को विकास, नाला, घडे री, सडक पुरा निर्माण भएको अवस् थामा पाउनुपनेर् हो  । त्यो अवस् था अहिले सम्म आएन जसले उहा“हरु मर्कामा पर्नुभएको छ ।
खास अवरो ध कहा“बाट भइरहे को छ ?
खासगरी उपभो क्ताकै बीचमा पनि समस् या छ । अहिले सम्म सबै ठाउ“मा ट्रयाक खुलिसके को अवस् था छै न । त्यो ट्रयाक खुल्न नसक्नुका पछाडि त्यहा“का पूर्वाधार नै हुन् । पहिले नै तयार गरिरहे का संरचनालाई मुआव्जा दिने कुरा नै समस् याको रुपमा आएको छ । ल्याण्ड पुलिङले दिने सरकारी मुआव्जा उहॉ“हरुले स् वीकार गर्नुभएको छै न् जसले गर्दा नया“ ट्रयाक खो ल्न समस् या भएको छ । त्यति मात्रै हो इन, त्यहा“ बसो बास गदैर् आएका सुकुम्वासीको बै कल्पिक व्यवस् था पनि गर्न सकिएको छै न । उहा“हरुको व्यवस् थापन नगर विकासले मात्रै सम्भव छै न । यसप्रति सरकारको दायित्व पनि हुनुपर्छ । यसै गरी ठूला–ठूला यो जना तर बजे ट अभाव नै हो  । एउटा सडक निर्माण गर्न एक करो ड खर्च लाग्ने दे खिन्छ । खाडल पुर्न ठे क्का दिने तर उहा“हरुले नियमित काम गर्न नसक्नुले पनि समस् या भएको छ । टे ण्डरमै ४० प्रतिशतसम्म घटे र टे ण्डर लिने तर काम गर्न नसक्ने समस् याले नै काममा ढिलाइ भइरहे को हो  ।
उपभो क्ताहरुले त सबै काम गर्न तपाइ“हरुलाई पूर्जा बुझाएकै हो नि समस् या किन ?
ल्याण्ड पुलिङका लागि त ५१ प्रतिशत उपभो क्ताहरुको सहमति भए पनि काम शुरु गर्न सकिन्छ । तर सबै को सहमति छै न । अकोर् कुरा मुआव्जा सरकारी दररे ट भन्दा बाहिर जानै सकिदै न । नत्र बे रुजु बो क्नुपनेर् अवस् था आउ“छ । यस् तो अवस् थामा सरकारी मुआव्जाले उहा“हरुको पुरानो संरचना भत्काउन पनि पुग्ने दे खिदै न, नया“ बनाउन त परै जाओ स । त्यसकारणले उहा“हरुले मान्नुभएको छै न । यसले गर्दा समस्या आएको हो  ।
यो समस् या निकै जटिल छ । तर पनि निकास खो ज्नुपर्छ । निकासका लागि त्यहीकै उपभो क्ताहरुस“ग सहमति माग्ने नै उत्तम विकल्प हो  ।
घो राही उपमहानगरलाई कसरी सुन्दर बनाउने भन्ने विषयमा पहिलो कुरा त नगरवासी नै जागरुक बन्नुपर्छ । नगर विकासले गरे का प्लानिङ र अहिले जथाभावी भइरहे का प्लानिङलाई हे र्दा नै थाहा हुन्छ । नगर विकासले गरे का प्लानिङकै कारण घो राही उपमहानगर दे शकै नमूना नगर बने को छ । अब पनि नगर विकासले गरे का प्लानिङ अनुसार अघि बढ्नुपर्छ । त्यसका लागि उपमहानगरपालिका र नगर विकास स“गस“गै भएर काम गर्नुपर्छ । यसरी स“गै रहे र काम गर्न सकियो भने सुन्दर घो राही बनाउन सकिन्छ । तर नवलपुर ल्याण्ड पुलिङको काम अलपत्रजस् तै ह“दा उपमहानगरले खासै चासो दे खाएको दे खिदै न । त्यहा“को जग्गाको कर उपमहानगरले लिन्छ । तर कुनै वजे ट विनियो जन गरे को पाइ“दै न । यसर्थ ल्याण्ड पुलिङका लागि बजे टिङ गरे र अघि बढे सुन्दर नगर बनाउन सकिन्छ ।
अब त तपाइहरु पनि त्यतै जाने कुरा छ नि, अब सहज हुन्छ कि ?
Previous: राप्ती साहित्य परिषदको वार्षिक साधारणसभा
Next: सवाल नारी समस्याको